विराटनगर महिलाका लागि सुरक्षित स्थल हो भन्ने बनाउँछु :उपमेयर कार्की |
विराटनगर महिलाका लागि सुरक्षित स्थल हो भन्ने बनाउँछु :उपमेयर कार्की
प्रकाशित मिति :2017-07-11 15:48:52
स्थानीय तह दोश्रो चरणमा भएको निर्वाचन अन्र्तगत तीनवटा प्रदेश मध्य एकमात्र महानगर विराटनगर महानगरपालिकाको उपमेयरमा इन्दिरा कार्की निर्वाचित हुनुभएको छ । नेपाली कांग्रेसकी उमेदवार कार्कीले २० हजार १८६ मत ल्याएर बिजयी हुनुभएको हो । प्रतिद्धन्दी भन्दा ८६२२ वढि मत ल्याएर कार्की विराटनगर महानगरको पहिलो ऐतिहासिक महिला उपमेयर हुनुभएको हो । महानगर विकासका लागि उहाँको भावी योजना के छ त महिलाखवर सुनसरी संवाददाता लिलाराज भटट्राइले गर्नुभएको कुराकानी ।
महानगरको उपमेयर बन्नुभएको छ, अब तपाईको प्राथमिकता के हो ?
मेरो प्रमुख प्राथमिकता विराटनगरलाई प्रदेश नम्वर एकको राजधानी वनाउनु हो । त्यसका लागि सक्दो जोड हुनेछ । त्यसपछिको प्राथमिकता महिलाका लागि हो । हिंसामा परेका महिला, अन्यायमा परेका, पछाडी पारिएका समुदायका महिलाको लागि काम गर्ने छु । उनीहरुका लागि विशेष तालिम संचालन गरि स्वरोजगार वनाउने छु । घरमै बसेर गर्न सकिने स्वरोजगार कार्यक्रम ल्याइने छ । विराटनगरलाई हराभरा, सभ्य र भयमुक्त बनाउन जोड दिइने छ । पानी पर्नुहुदैँन विराटनगर हिल्याम्मे बन्छ । गाँउवजार डुब्छन् । जनआन्दोलन चौकमै साइकल, मोटरसाइकल डुब्छन् । त्यसको उचित ब्यवस्थापनमा ध्यान दिनेछु ।
फोहोर ब्यवस्थापन, शिक्षा, सञ्चारको क्षेत्रमा पनि प्राथमिकता दिने छु । सामुदायिक विद्यालयको शिक्षाको गुणस्तर उकास्न सक्दो कोसिष हुने छ । अझै पनि विराटनगरमा सुत्केरी गराउन महिलालाई अस्पताल नपुरयाउने गरेको समेत पाइन्छ । महिलाले प्रसव पीडामा घरमै छटपटाउने अवस्था छ । त्यो लगायत सवै प्रकारको स्वास्थ्य समस्या हटाउन प्रत्येक वडामा एउटा एम्वुलेन्सको ब्यवस्था गरिने छ । दुई तीन वडा मिलाएर एउटा दमकलको ब्यवस्था गरिने छ । सिगिया र केसिलया खोला छेउछाउ रमणीय पार्क वनाउने योजनामा ध्यान दिने छु । विराटनगरलाई वन्द मुक्त वनाउन सवै राजनीतिक पार्टीहरु र सरोकारवालाहरु सँग छलफल गरिने छ ।
महिलामैत्री महानगर बनाउन के गर्नुहुन्छ ?
विराटनगरलाई महिलामैत्री र अपाँगमैत्री महानगर बनाउन सक्दो कोशिस गर्ने छु । महिलाका लागि विराटनगर सुरक्षित स्थल हो भन्ने वनाउनका लागि कार्ययोजना वनाएर अघि वढिनेछु । २४अ‍ै घण्टा विराटनगरमा महिलाले निर्धक्क हिडडुल गर्न सकिने वनाउनु पर्ने छ । विद्यालयलाई किशोरीमैत्री वनाइने छ । महिला र अपांगता मैत्री शौचालय निर्माण गरिने छ ।
महिलाले टिकट पाउनै गाह्रो, टिकट पाएपछि चुनाव लडन झनै गाह्रो हुन्छ भन्छन्, तपाईको अनुभव कस्तो रह्यो ?
त्यो समस्या हुन्छ । तर मैले अरु महिलाले जति भोग्नुभयो त्यति समस्या झेल्नु परेन । ३५ बर्षदेखि राजनीतिमा छु । अहिले पनि काँग्रेसको महासमिति सदस्य छु । महासमिति सदस्य भएको यो तेश्रो कार्यकाल हो । हरेक आन्दोलनको अग्रमोर्चामा छु । जेलनेल भोगेको छु । यी कारणले पनि मलाई टिकट पाउन त्यति गाह्रो भएन । तर चुनाव लड्न महिलालाई श्रोत साधनको अभाव त हुन्छ नै । मैले जनताको म प्रतिको विश्वासका कारण त्यति समस्या भोग्नु परेन । चुनौतिलाई सजिलै पार गरेँ ।
स्थानीय तहमा जनप्रतिनिधि आएपछि महिलालाई के सजिलो हुन्छ ?
लामो समय स्थानीय तह जनप्रतिनिधि विहिन रहयो । जनप्रतिनिधि नहुँदा विशेषगरि महिलालाई धेरै समस्या थिए । अव जनप्रतिनिधि त्यसमा पनि वडा वडामा महिला जनप्रतिनिधि भएपछि धेरै सजिलो हुनेछ । महिलाले आफना समस्या कर्मचारी सँग राख्न सक्दैनथिए । अव महिला जनप्रतिनिधिलाई समस्या राख्न पनि सजिलो भएको छ । महिला जनप्रतिनिधि आफैले समस्या भोगेका छन, देखेका छन । आफैले भोगको हुनाले महिलाका समस्या समाधान गर्न सहज हुन्छ । आफना समस्या राखेर समाधानका लागि आफना प्रतिनिधिलाई दवाव दिनसक्छन, कराउन सक्छन, गाली गर्न सक्छन । अव महिलाका आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक समस्याहरु समाधान हुन थाल्छन । एकै चोटि सवै समस्या समाधान हुन्छ भन्दिन विस्तारै सिस्टम वनाएर काम गरिन्छ । महिलाका लागि आएको वजेट दुरुपयोग हुन्थ्यो, अब त्यसो हुन पाउदैँन । महिलाका लागि आएको वजेट महिलाकै क्षेत्रमा खर्च गरिन्छ ।